कुन उमेरमा बच्चा जन्माउनु उचित ? यो उमेरमा खतरनाक – Mid Nepal News - मध्य नेपाल खबर - Mid Nepal News - मध्य नेपाल खबर
कुन उमेरमा बच्चा जन्माउनु उचित ? यो उमेरमा खतरनाक
Mid Nepal News, २१ माघ २०७५, सोमबार ०३:४३
सामान्यतया महिलामा प्रजनन क्षमताको विकास महिनावारी सुरु भएदेखि नै हुन्छ । यद्यपि, बच्चा जन्माउनका लागि १८ वर्ष नपुग्दासम्म महिला परिपक्व भइसकेका हुँदैनन् । यसर्थ, २५ वर्ष बच्चा महिलालाई बच्चा जन्माउनका लागि उपयुक्त उमेर हो । यो क्रम ३० वर्षसम्म चलाउन सकिन्छ ।-नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ ।